Nzuzo akpọrepu igwe anaghị agba nchara Manufacturers - China Cold Roll anaghị agba nchara Ibé akwụkwọ Factory, Suppliers
316L bụ ụdị igwe anaghị agba nchara nke molybdenum. N'ihi molybdenum ọdịnaya dị na nchara, ngụkọta arụmọrụ nke nchara a dị mma karịa nke 310 na 304 igwe anaghị agba nchara. N'okpuru ọnọdụ okpomọkụ dị elu, mgbe ịta ahụhụ nke sulphuric acid dị ala karịa 15% ma ọ bụ karịa karịa 85%, igwe anaghị agba nchara 316L nwere ọtụtụ ebe. jiri. 316L igwe anaghị agba nchara nwekwara ezigbo iguzogide ọgụ chloride ma ya mere ọtụtụ ndị na-eji na gburugburu mmiri. Igwe anaghị agba nchara 316L nwere oke carbon nke 0.03 ma nwee ike iji ya rụọ ọrụ ebe mgbakwunye anaghị ekwe omume yana oke nrụrụ corrosion chọrọ.